Manchester United oo ka dooneysa kooxda Bayern Munich badelka Jadon Sancho – Gool FM
Pep Guardiola oo ka hadlay xaalada dhaawacyada kooxda Man City kahor kulanka Wolverhampton
RASMI: Messi oo hoggaaminaya liiska xulka qaranka Argantina ee kulamada isreeb-reebka Koobka Adduunka 2022
RASMI: Liverpool oo shaacisay inay dhameystirtay heshiiska Thiago Alcantara
“ku biiritaankeyga Juventus weli waa macquul” – Luis Suarez
RASMI: Bruno Fernandes oo ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka ee kooxda Man United
“Riyadayda waa inaan ku guuleysto Champions League ka hor inta aan ka fariisan kubadda cagta”
Robertson oo shaaca ka qaaday fikirkiisa ku aadan heshiiska uu Thiago Alcantara ugu biirayo kooxda Liverpool
“Waxaan awoodnaa inaan markale ku guuleysano Premier League” – Ferran Torres
Muxuu ka yiri Berbatov wararka la xiriirinaya Gareth Bale inuu dib ugu laabanayo horyaalka Premier League??
Man City oo qorsheeneysa inay la soo saxiixato xiddig ay bartilmaameed ka dhiganayaan Real Madrid iyo Barcelona
Manchester United oo ka dooneysa kooxda Bayern Munich badelka Jadon Sancho
Dajiye July 25, 2020
(Manchester) 25 Luulyo 2020. Manchester United ayaa dooneysa inay xoojiso weeararka kooxdeeda xilli ciyaareedka soo socda, waxayna xiiseynayaan inay la soo saxiixdaan xiddig si wanaagsan kaga ciyaari kara garbaha weerarka.
Jadon Sancho ayaa si weyn lala xiriirinayay inuu ku biirayo kooxda Manchester United suuqa kala iibsiga ee xagaaga ee soo aadan, balse kooxdiisa ayaa codsatay lacago aad u badan si ay u fasaxdo.
Shabakada “Sky Sports” ayaa soo xigatay warbixin uu daabacay warsidaha “The Athletic” kaasoo tilmaamay in Manchester United ay xiiseyneyso inay la soo saxiixato xiddiga reer France iyo naadiga Bayern Munich ee Kingsley Coman.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in kooxda Manchester United ay ku dooneyso Kingsley Coman heshiiska amaahda ah, waxayna durba bilaabeen wada hadalada uu ugu soo dhaqaaqayo garoonka Old Trafford.
Bayern Munich ayaa u muuqata inaysan Kingsley Coman u ogolaan doonin inuu baxo inkastoo ay la soo saxiixdeen Leroy Sané, maadaama 24 jirka reer France uu dhaliyay 4 gool, isla markaana uu caawiyay 4 gool kale, 24 kulan uu ka ciyaaray horyaalka Bundesliga xilli ciyaareedkan.
Warbaahinta Talyaaniga oo si xooggan u aaminsan in Lionel Messi uu ku biiri karo Kooxda...
Carlo Ancelotti oo ammaanay xirfada Cristiano Ronaldo kaddib markii ay Juventus ku guuleysatay horyaalka Talyaaniga